China china n95 imaski ukwenza umshini ubuso buso indlebe loop umshini wokushisela umshini othomathikhi endlebeni yebhendi umshini wokushisela ifektri abakhiqizi I-Haojing
china n95 imaski yokwenza umshini ubuso buso indlebe loop umshini wokushisela umshini okuzenzakalelayo wendlebe ibhendi umshini wokuwelda
I-1.Imishini isebenzisa ubuchwepheshe bokushisela i-ultrasonic obukabili, obunokusebenza kahle okuphezulu, ukusebenza kwezindleko eziphezulu nokuqina okuphezulu.
Kudingeka umuntu oyedwa kuphela ukusebenzisa idivaysi eyodwa, ukunciphisa izindleko zabasebenzi.
3.Feeding, ukuzisika othomathikhi, Welding okuzenzakalelayo futhi blanking okuzenzakalelayo ziphephile futhi elula.
Ukushisela okuzenzakalelayo kwama-butterfly mask lugs kungashesha ukufaka indawo yokubeka indawo ukuze ivumelane nokukhiqizwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zobuso bevemvane.
Lo mshini wokuzenzakalelayo we-earband othomathikhi usetshenziselwa ikakhulukazi ukuwelda izifihla-buso ze-N95, futhi udinga umuntu oyedwa ukuwusebenzisa. Ngomshini wokusika kanye nomshini wokubopha onqenqemeni, kungenziwa imaski ephelele. Ingakhiqiza amaski angama-20 ngomzuzu.
Idivayisi isebenzisa i-touch screen ukuze isebenze, elula futhi esheshayo, futhi izilungiselelo zepharamitha zingabonakala kahle, futhi idivayisi ifakwe inkomba yamaphutha, engathola ngokushesha amaphutha futhi iwaxazulule ngesikhathi.
Ngaphambi kokuthi imishini ithunyelwe, sizokwenza imishini yokulwa nokugqwala kwemishini bese sidubula ividiyo yokusebenza ukuze kuqinisekiswe ukuthi ikhasimende lingayisebenzisa ngendlela ejwayelekile leyo mishini.
Isetshenziselwa ukuwelda izintambo zezindlebe ze-KN95, ingasetshenziswa nge-slicer kanye nomshini wokubopha onqenqemeni ukuqedela ukukhiqizwa kwemaski yonke. Isetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni imikhiqizo yenhlanzeko, imikhiqizo yezokwelapha, imikhiqizo yokuvikela nezinye izimboni.
30 ~ 40pcs / iminithi
Ukubekwa kwesikhunta semaski
Isetshenziselwa ukubeka izingcezu zemaski nemichilo yendlebe ye-weld ngamabhande wokuhambisa
Isetshenziselwa ukusika izindophi zezindlebe futhi isebenze ngomoya ocindezelweyo
Ingcindezi yengcindezi, kukhona inzwa lapha, uma ingekho imaski, akukho ngcindezi ezosetshenziswa. Uma unesifihla-buso, ungafaka ingcindezi ebhulohweni lasekhaleni lesifihla-buso lapha ukwenza lula ukufakwa kwezintambo zezindlebe
Iphaneli yokusebenza ethintekayo, isilungiselelo sepharamitha yokusebenza okubonwayo
Langaphambilini Umshini we-OEM Mask 3ply china umshini wemaski oyisicaba Umshini osheshayo wendiza yokusika indiza
Olandelayo: imaski yesandla abenzi bomshini indlebe iluphu yobuso imaskhi abenzi bemishini
imaski ibhukhi abakhiqizi umshini indlebe bheka ...